ललितपुर महानगरका उपमेयर सत्यालको राजनीतिक यात्रा |
ललितपुर महानगरका उपमेयर सत्यालको राजनीतिक यात्रा
‘श्रीमानको साथले नै म राजनीतिमा सफल भएकी हुँ: उपमेयर सत्याल
प्रकाशित मिति :2017-05-26 13:54:52
स्कूले जिवनमै (कक्षा ८) राजनीतिमा छिर्नुभएकी गिता सत्यालको अहिले परिचय फेरिएको छ । काभ्रे जिल्लाको पनौति नगरपालिका, खपासेमा वि.स २०३४ सालमा जन्मनुभएकी सत्याल हालै भएको स्थानिय तह निर्वाचनमा ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित हुनुभएको छ । सबैभन्दा पुरानो महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिको उपमेयरमा कांग्रेसबाट विजयी भैई इतिहास रच्न सफल सत्यालसगँ खेमा बस्नेतले गरेको कुराकानी ।
२०४८ सालबाट राजनितिक यात्रा सुरु
मैले २०४८ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी हुँ । २०५१ मै पद्मकन्या क्याम्पसमा विद्यार्थी संघमा अबद्ध भै काम गर्ने मौका पाएँ । विवाहपछि भने नेपाल महिला संघ ललितपुरकोे जिल्ला सदस्य हुँदै १० वर्षसम्म पार्टीको भातृ संगठन, महिला संघको जिल्ला सचिवका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाले । काँग्रसेको १२ औँ महाधिवेशनदेखि संगठनबाट पार्टीमा प्रवेश गरे । ललितपुरमा ५ वर्ष जिल्ला सदस्य भएपछि हाल महिला संघ ललितपुरको अध्यक्ष छु । यहाँसम्म आइपुग्दा मैले जीवनको धेरै समय समाजसेवामा खर्चिएकी छु ।
साथीहरुको लहलहैमा राजनैतिकमा प्रवेश
मेरो राजनीतिक करियर ख्यालख्यालमै सुरु भएको थियो । बुझेर सुरु गरेकी थिइन् । पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि राजनीति थिएन । तर, बुबाले घरमा राजनीतिका बारेमा कुरा गरिरहँदा म प्रभावित थिएँ । साथीहरुको लैलहीमा राजनितिमा लाग्न थाले । महिला संघको जिल्ला सदस्य भएर काम गरेपछि बल्ल राजनीति बुझने अवसर पाँए ।
विपिको फोटो बोकेको भन्दै मेरो बुबालाई थुनामा राखियो
म जन्मनुभन्दा केही समय अघि बुबाले भारतबाट नेपाल आउदा विपी कोइरालाको फोटो बोक्नु भएको रहेछ । यो २०३२ साल तिरको कुरा हो । उहाँलाई फोटो बोकेकै कारण नेपाल प्रवेश गर्ने वितिकै महेन्द्रनगरमा पक्राउ गरियो । २४ घण्टा हिरासत बसेपछि रिहा हुनुभएको रहेछ । प्रहरीले विपीको फोटो जलाइदिएछन् । बुबाले कहिलेकाही आफूमाथि भएको दुव्र्यवहार बारे भन्नुहुन्थ्यो । उहाँको कुराबाट उहाँ काँग्रेसप्रति आस्था रहेको बुझिन्थ्यो । उहाँले बारम्बार राजनीति बारे गरेको कुराकानीले मलाई राजनीति प्रति मोह बढाउदै गयो । हुँदा त म साथीहरुको लहलहैमा राजनीतिमा होमिएकी थिए । यसको स्रोत वा प्रेरणा भनेको नै मेरो बुबा नै हुनुहुन्छ ।
श्रीमान पुरुषोत्तम नेपालका साथमा सत्याल
गाउँकै श्रीराम माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी गरेकी मैले महेन्द्ररत्न क्यापस काठमाडौंबाट नेपाली विषयमा स्तानोकत्तर गरेकी छु । स्तानक भने पद्मकन्या क्याम्पसबाट गरेकी हुँ । यहीबाट औपचारिक राजनीति सुरु गरेकी थिए ।
राजनीतिक यात्रामा श्रीमानको साथ हलपल
१५ वर्षकै उमेरमा मेरो विवाह वि.स २०५१ सालमा पुषोतम नेपालसंग भएको हो । मैलाई विवाहपछि राजनीति गर्न समस्या हुन्छकी लागेको थियो । तर, श्रीमान मेरो इच्छाको कहिल्यै बाधक बन्नुभएन । परिवारले राजनीति गरेको मन नपराएपनि मेरो हरेक काममा श्रीमानले सहयोग गर्नुभयो । उहाँले हरपल साथ सहयोग र विश्वास नगरेको भए आज मेरो राजनीतिक करिअर अगाडी बढाउन मुस्किल पथ्र्यो । यस अर्थमा निशर्त सहयोग गर्ने श्रीमान पाउनुले म आफैलाई भाग्यमानी ठान्छु । श्रीमानको प्रेरणाले नै म राजनीतिमा सफल भएकी हँु ।
मेरो जित नै ललितपुरवासीको जित हो
म जहाँ भोट माग्न गए त्यहाँ एकदमै माया, सदभाव पाए । ललितपुरवासीको मायाकै कारण म विजयी भएको हो । मेरो जित नै ललितपुरवासीको जित हो । उहाँहरुको माया र विश्वासले मलाई मेरो काँधमा ठूलो जिम्मेबारी आएको महसुस भएको छ ।
मत परिणम आउँदाको क्षण
मतगणना भैरहँदा मलाई जित सुनिश्चित छ भन्नेमा ढुक्का थिए । वडा नम्बर १ देखि मत गन्दै जाँदा मेरो मत बढीरहेको थियो, बिचमा आइपुग्दा तलमाथि पर्छु जस्तो लागिरहेको थियो । तर परिमाण राम्रो आयो । म ५ हजार ५७९ मत अन्तरले जित्न सफल भए ।
यो जनताले मलाई गरेको विश्वासको मत हो । जनताको विश्वासलाई जगाइराख्न म डटेर काम गर्नेछु ।
महानगरपालिकाको विकासका लागि मेरो योजना
समाजलाई अग्रगमनतर्फ डोर्याउने र समाज परिवर्तनको सम्वाहक नै राजनीति हो । त्यसैले नै म राजनितिमा होमिए । मलाई लाग्छ राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै हरेक अधिकार स्थापित गर्न सक्छ । करिब २५ बर्षको राजनितिक यात्रामा मैले महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकी छु । ललितपुरबासीले गरेको यो विश्वासले मलाई मेरो काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको महसुस गरेकी छु ।
१. उद्यशिलता बृद्धि
ललितपुर हस्तकलाको खानी हो । त्यसैले महिला दिदिबहिनीहरुका लागि हस्तकला उद्योगको प्रवद्र्धन तथा रोजगार सिर्जना गरी आत्मनिर्भर गराउने कार्यक्रम ल्याउने छु । त्यसका लागि निःशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्ने छु । महिला शिक्षित हुन आवश्यक छ । उद्यमी हुनु जरुरी छ । र नेतृत्व तथा क्षमता विकास हुन अनिवार्य छ । म अव महिलाका यी सवालप्रति पनि गम्भीर भएर लाग्नेछु । यसबाहेक महिलाहरुलाई शिक्षित गर्ने निःशुल्क शिक्षा र महिलालाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन उद्यमी बनाउने कार्यक्रम ल्याउर्ने योजना छ ।
२. दुई महिलालाई सुत्केरी भत्ता
नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको निशुल्क सुत्केरी भत्ता बाहेक हरेक महिना महानगरपालिकाका दुई जना गरिब र दलित महिलालाई सुत्केरी भत्ता स्वरुप १० हजार दिने मेरो योजना छ । उनीहरुले २ वटा बच्चा जन्माउदासम्म यो सुविधा पाउनेछन् ।
३. धुवाँधुलो रहित हरियाली ललितपुर
पाँच वर्षमा धुवाँधुलो रहित हरियाली ललितपुर बनाउने र ललितपुरलाई नमुना महानगर बनाउने मैले परिकल्पना गरेकी छु । यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने छौ । हप्तामा एकपटक वाटर फ्लो गर्ने, खाली जग्गा भएका ठाउँमा बृक्षारोपण गर्ने, पर्यटकलाई आकर्षित गर्न होमस्टे सञ्चालन गर्ने, जनताका आधारभूत कुराहरु जति सक्दो छिटो प्रत्याभूत गराउने, जेष्ठ नागरिकको सम्मान स्वरुप प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागरिक समाज बनाउने, प्रत्येक वडामा बाल उद्यान निर्माण गर्ने ।
४. महानरवासीको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने
महानरवासीको सहभागितामा उहाहरुको पहिलो आवश्यकता र समस्याको पहिचान गरि उहाँहरुकै सहभागीतामा समाधान गर्ने मेरो योजना छ । पहिलो बर्षको काम पनि हामी उहाँहरुसगै छलफल गरेर अघि बढ्नेछौं । यतिखेर म मतदातालाई धन्यवाद दिन घरदैलोमा छु । यसै शिलशीलामा महानगरका समस्या र चुनौति विषयमा समेत छलफल र कुराकानी भइरहेको छ ।
त्यसैगरी महानगरबासीको न्यायमा पहुँच सहज बनाउन मेरै नेतृत्वमा गठन हुने न्याय समितिलाई ससक्त बनाउनेछु । निमुखा, असाहय व्यक्तिले कानुनी उपचारबाट विमुख हुन नपरोस र विधिको शासन निर्माणका लागि बजबुत न्याय पद्धती बनाउनेछु र यसको लागि कानुनविद राखेर उहाँहरुको सल्लाह समेतलाई ध्यान दिएर कानुनी राज्य निर्माण गर्नेछौ । जहाँ न्याय पाउनबाट कोही पनि बन्चित हुनेछैनन् भन्ने मेरो परिकल्पना छ ।
हामी सबैको एजेण्डा एउटै
ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा हामी जति महिला उम्मेदवार थियौ । फरकफरक पार्टीबाट थियो, तर हाम्रा मुद्धा फरक थिएनन् । महिला शसक्तिकरण, महिला हिंसा रोक्ने, महिला शिक्षा र रोजगारी सिर्जना आदि सबै महिलाका साझा मुद्धा हुन् । म विजयी भइसकेपछि सबैका मुद्धालाई उत्तिकै प्राथामिकताका साथ उठान गर्नेछु ।